ठूला विमानस्थल निर्माण आयोजनाः कुन कुनमा के के भइरहेको छ? हेर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
ठूला विमानस्थल निर्माण आयोजनाः कुन कुनमा के के भइरहेको छ? हेर्नुहोस
नेपालमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साना विमानस्थल आयोजनाको निर्माण तथा मर्मत तीव्र गतिमा गरे पनि ठूला विमानस्थलमा भने ढिलाइ भइरहेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल चालु अवस्थामा रहेका ठूला चार विमानस्थल आयोजनामध्ये पोखरा विमानस्थलको मात्र निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य करिब सम्पन्न भएको भनेर प्राधिकरणले भनेकै एक वर्ष भइसकेको छ। गत वर्ष करिब सम्पन्न भएको भनिएको उक्त आयोजनाको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ।
९३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको भनिएको उक्त विमानस्थल आयोजनामा अहिले सेन्ट्रल एसी जडानको काम नहुँदा रोकिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले कामदार नल्याउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
तस्बिर: निर्माणधिन पोखरा विमानस्थल।तस्बिर: निर्माणधिन पोखरा विमानस्थल।
यन्त्र तथा उपकरण जडानको काम पनि प्राविधिक अभावमा रोकिएको छ। यसरी ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रमुखले ताकेता गर्दा समेत निर्माण कम्पनीहरुले काम अघि बढाएका छैनन्।
निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरिएको पोखरा विमानस्थलको काम भने जारी रहेको छ।
भौतिक निर्माणको काम करिब सकिएको उक्त आयोजनामा फिनिसिङ र उपकरण जडानको काम मात्र बाँकी रहेको छ। सन् २०२१ को जुलाइभित्र सकिनेमा निर्माण कम्पनी र प्राधिकरण विश्वस्त रहेका छन्।
कोरोना भाइरसको प्रभावले केही समय काम प्रभावित भएपनि समयमै सकिने प्राधिकरणले बताएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक÷निजी सहभागिताका मोडेलमा स्वीजरल्याण्डको ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल छनौट भई विमानस्थल निर्माणको लागि अघि बढाइएको प्रकृया लगभग बन्द भइसकेको छ।
लगानीको स्रोत खोज्ने बाटो बन्द भएपनि सरकारले यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। प्राधिकरणले भने रुख कटान तथा पूर्व तयारीका लागि काम अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ।
लगानीको स्रोत सुनिश्चित नभएपनि प्राधिकरणले यही आयोजनाका लागि भनेर गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ।
काठमाडौंको त्रिभुनवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि भन्दै अघि बढाइएको आयोजना किस्ता किस्तामा काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
विमानस्थलको उत्तरतर्फ रनवे बराबरको ट्याक्सीवे निर्माण तथा एप्रोन क्षेत्र विस्तारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरको माध्यमबाट ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भइ काम सुरु भएको छ। त्यस्तै दक्षिणतिरको १२०० मिटर ट्याक्सी वे निर्माणका लागि टेन्डर आव्हान भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
सन् २०१२ देखि सुरु भएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन।
नया नेपाली कमेडी भिडियो सखर चिनी हेर्नुहोस भिडियो
Tags: च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल ठूला विमानस्थल निर्माण आयोजनाः कुन कुनमा के के भइरहेको छ? हेर्नुहोस
Previous फेरी अर्को घातक भाइरस फेला पर्यो कोरोना भन्दा 100 गुणा खतरनाक हेर्नुहोस भिडियो सहित..
Next ५० बिगाहामा लगाएको गाँ*जाखेती नस्ट प्रहरीद्वारा